ओमिक्रोन डेल्टा भेरियन्टभन्दा बढी खतरनाक, माथिल्लो श्वासप्रश्वास नलीमा गराउँछ सङ्क्रमण ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
ओमिक्रोन डेल्टा भेरियन्टभन्दा बढी खतरनाक, माथिल्लो श्वासप्रश्वास नलीमा गराउँछ सङ्क्रमण !
२८ पुस २०७८, बुधबार ००:००
विश्वमा क कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फेरी फैलिरहेको छ । कोरोनाको शुरुवात चिनको वुहानबाट भएको थियो ।त्यसपछि डेल्टा भेरियन्ट आयो र अहिले बर्तमान अवस्थामा नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन आइरहेको छ ।
यसले विस्तारै विश्वमा विकराल रुपलिदैँ गइरहेको छ । ओमिक्रोनका विरामी दिनप्रतिदिन एकदमै थपिदै गएको छ । यसबाट बढी युरोपियन मुलुक बढी प्रभावित भएको छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाको नयाँ विरामी एकै दिन डेढलाख भन्दाबढी संक्रमित भइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दो देखिएको छ । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरेको छ । अत्यावश्यक नपरी बाहिर हिडडुल र २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने बताएको छ ।
मेला सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । बर्तमान समयको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टा भेरियन्टभन्दा बढी संक्रमण रहेको सङ्क्रामक रहेको बताइएको छ ।
ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिलता कम गराए पनि सङ्क्रामक दर गुणात्मक रुपमा फैलिने बताइएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरियन्टको अन्य भेरियन्ट जस्तै मानिसमा लक्षण हुने गरेको जानकरी दिएको छ ।
अहिले गरिरहेका अणुवांशिक अध्ययन (जीन सिक्वेन्सिङ)ले ओमिक्रोन भेरियन्ट बढ्दै गएको देखाएको छ । यो भेरियन्टमा अरु भेरियन्टका तुलनामा जटिलता कम भए पनि सङ्क्रमण गुणात्मक रुपमा धेरै हुने भएकाले जटिल हुने अनुपात बढेर जाने बताएको छ ।
अन्य भेरियन्टको तुलनामा यो भेरियन्ट तीव्र दरमा फैलिने गरेको छ । ओमिक्रोनले माथिल्लो श्वासप्रश्वास नलीमा सङ्क्रमण हुने गर्छ । अन्य भेरियन्टले तल्लो श्वासप्रश्वास नली वा फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने गर्दथ्यो ।
ओमिक्रोनले पार्ने असरका बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना सङ्क्रमण विश्वभर एक करोडमा पुष्टि भएको छ । यति धेरै सङ्क्रमण हुनुको कारण ओमिक्रोन भेरियन्ट नै रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ ।
ओमिक्रोनले कोरोना खोप लगाएका र नलगाएका दुवैलाई सङ्क्रमण हुन सक्दछ । सङ्क्रमित भएकामध्ये खोप नलगाएकालाई धेरै गाह्रो बनाउन सक्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ ।खोप नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने पनि खतरासमेत रहेको छ ।
जनस्वास्थ्यविद्ले ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसको घाँटीमा सङ्क्रमण गराउने बताएका छन् । उनले घाँटी खसखस हुने, चिलाउने र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिने जानकारी दिए ।
यस्तै ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसमा बढी हाछिउँ आउने, हल्का ज्वरो आउने, धेरै रुघा लाग्ने जस्तो लक्षण पनि देखिने गर्दछ ।
सङ्क्रमण दर बढ्दै
सङ्क्रमण दरको प्रवृत्ति पनि वृद्धि भएको छ । यही पुस १९ गते २.६ प्रतिशतमा रहेको सङ्क्रमण दर पुस २७ गते १८.६ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै पुस २६ गते १२.७ प्रतिशत, पुस २५ गते ९.२ प्रतिशतमा मात्र सङ्क्रमण दर रहेको थियो ।
पुस २० गते ४.२ प्रतिशत, पुस २१ गते ४.३ प्रतिशत, पुस २२ गते ४.५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६.५ प्रतिशत र पुस २४ गते ७.१ प्रतिशत कूल सङ्क्रमण दर रहेको थियो ।
पुस २७ गते १५ हजार ३३ जनाको परीक्षणमा दुई हजार ४४४ मा सङ्क्रमण देखिएको थियो । पुस २६ गते एक हजार ४४६ सङ्क्रमित र सात हजार ८५५ सक्रिय सङ्क्रमित तथा पुस २५ गते सङ्क्रमित एक हजार १६७ पुगेको र सक्रिय सङ्क्रमित छ हजार ७५५ देखिएका छन् ।
यसबाट बच्नका लागि कोरोना भाइरसको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनाका साथै जनस्वास्थ्य मापदण्ड अर्थात् भिडभाड नगर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग र हात साबुनपानीले पटक पटक धुनु पर्दछ । सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्न र एक व्यक्ति तथा अर्को व्यक्तिबीचको भौतिक दूरी एक मिटर कायम गर्नुपर्दछ ।
यस्तै सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले १२ वर्षदेखि माथिका सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप एक वर्षअघिदेखि नै लगाउन थालेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको ७६.५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ५६.९ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् ।
यस्तै कूल जनसङ्ख्याको ५०.२ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ३७.३ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि आगामी माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्नुका साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: Jan 12, 2022
सरकारलाई बुस्टर डोज खोप फरक फरक लगाइदिन खोप विज्ञहरुको सुझाव
सरकारलाई बुस्टर डोज खोप फरक फरक लगाइदिन खोप विज्ञहरुको सुझाव भएको छ । सरकारले फ्रन्टलाइनर,
नेपालमा सक्रिय संक्रमित ९० हजार नाघ्यो, आज ८४५४ जनामा कोरोना पुष्टि
नेपालमा कोरोना संक्रमित दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । देशभरमा संक्रिय संक्रमितको संख्या ९० हजार नागेको
टेकु अस्पतालमा खोप अभियान आजदेखि पुनः हुने
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा एक हप्ताका लागि स्थगन गरिएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान
२४ घण्टामा १० हजार ३१९ कोरोना संक्रमित थपिए, ४ जनाको मृत्यु
नेपालमा कोरोना संक्रकितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३१९
शुक्रराज अस्पतालमा ६० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, खोप कार्यक्रम स्थगित
स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएपछि शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जारी खोप कार्यक्रम स्थगित भएको
नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन पुष्टि
नेपालमा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण दर तिब्र बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा Smart QR Teller लागू, २ लाखसम्म लिन अब चेक नचाहिने
बर्जु महोत्सवको सम्पुर्ण क्षतिपूर्ति आयोजक र प्रायोजकले ब्यहोर्नुपर्ने निष्कर्ष
शंखरापुरमा बन्द कोठामा एक दम्पती मृत भेटिए
बेहुलाले बेहुलीलाई थप्पड हानेपछि विवाह रद्द गरेर काकाको छोरासँग विवाह गरेपछि…!
सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र दुर्घटना हुँदा एक मजदुर बेपत्ता
प्रबन्ध निर्देशक: साजन शर्मा निर्देशक: योगेन्द्र मण्डल/दीपा रेग्मी ब्यवस्थापक: किसोर पौडेल